xoogga dalka oo soo bandhigay Sarkaal ka tirsanaa Shabaab (SAWIRRO) | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta xoogga dalka oo soo bandhigay Sarkaal ka tirsanaa Shabaab (SAWIRRO)
xoogga dalka oo soo bandhigay Sarkaal ka tirsanaa Shabaab (SAWIRRO)
Saraakiisha ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed ayaa degaanka Baar-sanguuni oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose ku soo bandhigay sarkaal sare oo ka tirsanaa ururka Al-shabaab.
Ninkan ka soo goostay Shabaab oo uu la socday dagaalame Shabaab ka tirsan ayaa waxaa lagu magacaabaa Cali Cabdullaahi Sadiiq.
Saraakiisha xoogga dalka ayaa sheegay ninkan inuu ahaa sarkaalkii Shabaab u qaabilsanaa degaanka Xaaji Muuse oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose.
Sarkaalka Shabaab ka soo goostay oo hadal kooban siiyay warbaahinta ayaa si cad u sheegay inuu ka soo laabtay fikirkii Al-shabaab, wuxuuna balan qaaday in wixii hada ka dambeeya uu ka mid noqon doono shacabka Soomaaliyeed, lana shaqeyn doono dowladda.
“Maanta wixii ka dambeeya waxaan si cad u sheegayaa inaan ka baxnay fikirkii Al-shabaab, Shabaab waxaan ka tirsanaa Sideed sano, waxaan ka soo qeyb qaatay dagaalo badan, waxaan jeclahay inaan la shaqeeyo dowladda, shacabkana ka mid noqdo, ” Ayuu yiri sarkaalka ka soo goostay Shabaab.
Taliyaha ururka 58-aad, Guutada 11-aad ee qeybta 43-aad ciidanka xoogga dalka, Laba xidigle C/fitaax Ibraahim Maxamed ayaa warbaahinta u sheegay in Tuulada Muuse Xaaji ay kula dagalameen ururka Al-shabaab, waxaana uu tilmaamay inay ka dileen 11 Dagaalame.
Sidoo kale Taliyaha waxa uu sheegay in gacanta ciidamada xoogga dalka uu isku soo dhiibay sarkaalkii Tuulada Muuse Xaaji u qaabilsanaa Al-shabaab.
Ciidanka xoogga dalka ayaa maalmahan waxa ay hawlgallo ka dhan ah ururka Al-shabaab oo joogto ah ka wadaan degaanada iyo tuulooyinka ka tirsan gobolka Jubbada Hoose.